Vinaingitra mametaka sary an-tsaina an'i Shina ho an'ny orinasa fanaovana dokambarotra sy mpanamboatra | Lima
Ny fitaovam-pandinihana dia miseho mandrakariva amin'ny fiainantsika andavan'andro araka ny fantatsika rehetra, toy ny fangatahana takelaka fiara, ny sakana mitoka-monina amin'ny lafiny roa amin'ny arabe, ary ny famantarana famantarana ny fifamoivoizana.
Doka fanaovana dokam-barotra, doka amin'ny rindrina, boaty maivana, toeram-pialofana bus, dokam-barotra eny an-tsena, doka eny an-dalana, fantsom-pirinty vita amin'ny taratasy, marika famantarana fiarovana amin'ny arabe, barika fiarovana, fambara lalana an-dalambe, famantarana famantarana fiarovana amin'ny indostria sns.
1. Fitrohana inkjet azo antoka
2. Famirapiratana avo, refin-taratra hatramin'ny 100cd / lx / m2
3. Fifanentanana tsara, mifanaraka amin'ny saika misy curved rehetra
4. Karazan-loko misy
5. nendahana patter tamin'ny fomban'ny prisma
Tabilaon'ny habe amin'ity famolavolana ity
habe A S M L XL
sakany 1.35M 1.55M 1.8M 2.7M 3.15M
Fitaovana lamba fandefasana taratra
Ny fitaovana mitaratra dia mizara ho lamba manaitaitra sy lambam-pandrefesana. Ny fampiharana dia fiarovana ny lalana sy ho an'ny tena manokana
fiarovana. Reflective Sheeting Signs dia fitaovana hita taratra natokana ho an'ireo takelaka fifamoivoizana sy lozisialy, vita amin'ny sosona azo itarafana noforonin'ny vakana fitaratra sy ireo fitaovana polymer sasany toy ny PVC, PET, Acrylic, PC, sns.
Famirapiratana avo lenta - ny fakantsary microbead fitaratra nataonay manokana dia novokarin'ny teknolojia matihanina. Ny fahitana ambony dia manome antoka fa ny tariby azo antoka dia maneho taratra mazava kokoa amin'ny maizina, izay hampitombo be ny fahitana mandritra ny andro sy ny alina. Ny endriny miavaka amin'ny lamina microbead fitaratra dia manome hazavana mamirapiratra rehefa manome taratra hazavana. Hatsarao ny fahitana, mino ianao fa marina izy, manatsara ny SAFETY - misy loza hatraiza hatraiza ary ahena ny vintana sy ahiana hitrangan'ny lozam-pifamoivoizana amin'ny alàlan'ny fampiasana ny hazavana sy ny SAFETY MAZAVA.
Adhesive indostrialy, mora ampiharina. Izahay dia nanao an'ity kasety taratra ity ho habe samihafa hanamorana ny filanao manokana. Anisan'izany ny hafanana sy ny hamandoana. Ny kasety PVC dia manana tanjaka matanjaka mafy, ary haavo manalavitra, hanoherana ny famotehana sy ny triatra, ny firaiketam-po mahery. Ny hafanam-po dia mety mihoatra ny fiainana aza. Ny kasety fanaovana sonia azo antoka dia sarotra, mateza ary mahazaka singa ilaina amin'ny fampiasana anatiny sy ivelany, ary ezaka tsy tapaka ho an'ny dia an-tany azo antoka.
MAZAVA FANAMINANA MAZAVA MAZAVA MAFY MAZAVA azo antoka ny fampiharana kasety taratra, misy karazany maro ny fampiharana toy ny toeram-piantsonana fiara, trano fanatobiana entana, trano fitehirizana, birao, efitrano fianarana, hopitaly ,, garazy, arabe, ozinina, masinina, trano fisakafoanana, entana, garazy varavarana, kamio, sambo, boaty mailaka, fiarovan-doha, karazana tranofiara, kamio, boaty mailaka, bisikileta, fiara, rv, kitapom-batsy, lalamby, lalamby, zotram-pifamoivoizana, mpamily, fitsangatsangana, bisikileta ary jogging amin'ny fampiasana isan'andro, ny faritra mampidi-doza. Mety tsy manam-petra ny kasety ataontsika.
Mora ampiasaina. Faritra madio sy maina takiana. Hetezo ny halavan'ny kasety takiana, rehefa apetaho eo amboniny ny kasety, esory ny kasety ary atsofohy amin'ny toerany, aza hadino ny mametaka azy indray mandeha, aza apetaho miverimberina, raha tsy afa-po tanteraka amin'ny rakipeo azo antoka ianao, azafady Mifandraisa aminay raha hiverenana ianao na hamerenanao vola feno. Hamaha izany ho anao izahay! Avelao ianao tsy hanana ahiahy.
Fonosana anatiny miaraka amin'ny kitapo horonantsary PE hiarovana ny vokatra, fonosana ivelany miaraka amin'ny baoritra mafy arakaraka ny fenitra fanondranana.
Teo aloha: Horonantsary azo itarafana ny PVC Reflective ho an'ny takelaka bileta
Manaraka: Taratasy hazavana sarimihetsika translucent
Horonantsary azo refesina vita amin'ny Vinyl
Petra-hazavana momba ny sarimihetsika
Sarimihetsika horonam-baravarankely vita amin'ny horonam-baravarankely